XOG: Dhibaatooyinka heysta maamulada GalMudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed – Xorriya Online
XOG: Dhibaatooyinka heysta maamulada GalMudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed
Xorriya.com: Waxaa isasoo taraya dhibaatooyinka laga soo werinayo gobalada dalka gaar ahaan dowlad goboleedyada GalMudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed.
GalMudug: Dhibaatada ugu weyn ee heysata waxaa lagu sheegay amni darro isugu jirta, dilal la xariira aanooyin qabiil, afduubka gaadiidka dad weynaha, iyo kooxda Al-Shabaab oo kordhisay dhibaatooyinka ay ku hayso dadka deegaanka.
Madaxdii ay aheyd in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka iyo baahiyada ka jiro Galmudug ayaa waxeey ku mashquuleyn siyaadda guud ee dalka sida doortashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan.
Koonfur Galbeed: Waxey wajaheysa xaalado bini’aadinimo oo ka dhashay go’doonka saaran degmooyinka gobalada Bakool iyo Bay, gaar ahaan Xuddur, Waajid iyo Diinsoor. Sidoo kale waxaa ka jira weerarada Alshabaab iyo dagaalo u dhaxeeya dadka ku nool Wanlaweyn oo gobalka Shabeelada Hoose ah.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ah mas’uulka ugu sarreeyo ayaa muddooyinkii dambe wuxuu ku sugnaa magaalada Muqdisho, isaga oo halkaas u joogay arrimo la xiriiro doorashooyinka.
HirShabeelle: Waxaan weli aan xal laga gaarin colaada dadka walaalaha u dhaxeysa ee Matabaan iyo nawaaxigeda. Sidoo kale rabshadihii gobalka Hiiraan ayaa wali sidoodii u taagan iyo dhibaatootin kale oo arrimaha siyaasadeeda la xiriira.
Doorashadii madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa waxaa ka dhacay tabasho iyo diidmo ka timid dadka reer Hiiraan. Odayaasha dhaqanka ee magaalada Beledweyne ayaa sheegay in xaq darro iyo sifo aan sharci aheyn xilka loogu doortay Cali Guudlaawe, arrintaan ayaa sababtay banaanbaxyo waaweyn uu dhiig ku daatay ineey ka dhacaan gudaha Beledweyne iyo inuu madaxweyne Cali Guudlaawo tagi waayo magaalada Beledweuyne.
Seddexdaan madaxweyne ayaa waxaa lagu eedeeyaa ineey ku mashquulsan yihiin siyaasadda guud ee dalka, doorashooyinka iyo ineey inta badan ku sugan yihiin Muqdisho, halka ay aheyd ineey xooga saaraan wax ka qabashada dhibaatooyinka iyo hormarinta adeegyada hor-tabinta u leh deegaanada ay madaxda ka yihiin.
Xorriya.com: Kala Soco Warar iyo Warbixinno Xaqiiq Ah